Nkwekọrịta ihu igwe: ịzọrọ ndị mmadụ na jaket ọma: Martin Vrijland
Njikọ ihu igwe: ịzọrọ ndị mmadụ na akwa akwa akwa
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 June 2019	• 19 Comments
Naanị ị ga-achị ọchị sophistication bụ nke a na-apụnara ndị mmadụ n'okpuru aha 'nkwekọrịta ihu igwe'. Akparịta ụka ọhụrụ Orwellian bụ nke a họọrọ nke ọma. Nke a bụ otú i si eme ya: ,,Anyị na-aga ịnwa onye ọ bụla ka ọ bịa. Nke ahụ apụtaghị na ihe agaghị agbanwe. Ma anyị nwere afọ 30 maka mgbanwe ndị ahụ, ọgbọ. ''
A gbanwere ihe niile na akụkọ Orwellian. Ihe atụ nke a bụ: ọrụ afọ ofufo, mmanye udo (iziga ndị agha n'ime agha), nlekọta ahụike uche (ụlọ mkpọrọ na nchịkọta ọgwụ) na ọtụtụ ndị ọzọ. Mana nkwupụta a bụkwa nkọwa doro anya Orwellian: "Anyị ga-eduhie onye ọ bụla". Na omume nke pụtara ihe dị ka: 'Anyị ga-ata onye ọ bụla na-adịghị esonye ahụhụ.
Anyị na-ahụ na mgbe e mesịrị na otu ihe nke AD:
Ma ebumnuche nke Agreement Climate na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara CO2030 na 2 n'ime afọ iri na otu karịa 1990. Iji mezuo nke a, ndị isi oche ga-eweta ndepụta nke usoro, dịka mmụba nke ọnụahịa gas na ọnụ ala nke ọkụ eletrik. A ga-enwekwa enyemaka na mgbazinye ego maka nfuli ọkụ na mkpuchi ụlọ.
Ma kpọmkwem ihe niile ga-ele anya ga-arụ ọrụ na oge na-abịa. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ bụ ịchọrọ maka okwu obi ụtọ. Dịka ọmụmaatụ, Minista Kajsa Ollongren (Living) na-ekwu na onye ọ bụla nweere onwe ya ikpebiri onwe ya otú ha chọrọ ime n'ụlọ ha. , Ndị chọrọ ime mgbanwe ụfọdụ nwere ike ịnweta ndụmọdụ banyere nke a na obere oge. O nwere ike ịbụ na ị nwere ike ịhazigharị ihe ọkụkụ gị. "
Ndị obodo na-eji nlezianya mara banyere nnukwu nsogbu nke ndị nwe ụlọ ga-ewere - site na ịchọta ụlọ ha ma ọ bụ site n'ibipu gas. ,, Ọ bụ na ụlọ gị adịghị mma? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta enyemaka maka nke a. "" Ma ego ole na ole na ọnọdụ ndị ka dị ka akara ajụjụ.
O doro anya na a ga-enwe ego okpomọkụ mba nke ndị mmadụ nwere ike ịgbaziri na 25.000 euro dị otú ahụ iji mee ka ebe obibi ha dịkwuo. Onye ọ bụla nke na-achọghị ịgbaziri ego dị otú ahụ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka ego a n'akpa uwe ha, ga-etinye ego dị ukwuu maka ụgwọ ọrụ ume n'ihi ụba gas na-arị elu na afọ ole na ole.
Na agbanyeghị, o yiri ka ichere ichere ruo mgbe njedebe 2021 na nnukwu ntigbughari. Mgbe ahụ, ndị obodo niile aghaghị ime atụmatụ maka ike ọkụ na mpaghara. A ga-etinye netwọk ikuku, karịsịa na obodo ukwu. Maka ụlọ ndị jikọtara na ya, mmiri ọkụ ahụ nwere ike ịhapụ ụlọ ahụ. "Ị dịghị mkpa ihe ọ bụla ugbu a," ka Ollongren na-ekwu.
Paragraf nke mbụ na-ekwu na ego nke gas na-arị elu, ọkụ eletrik aghọwokwa ọnụ ala. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ezi uche, nke a pụtara na ị ghaghị ịmeghari ka ị gbanwee site na ngwa ikuku na eletrik. Nke a na-akwụ gị ụgwọ ọ bụla ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, gas na-arị elu na 90% na ọkụ eletrik na-ada naanị 1%, ị ghaghị ụgha dị ka onye ozi, mana onye ọ bụla na-edozi ka furu efu. Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, arụmọrụ nke eletrik na, dịka ọmụmaatụ, ikpocha ụlọ dị ntakịrị, ị ga-azụrịrị ọkụ eletrik na nkwụsịtụ ị ga-efunahụkwa.
Paragraf nke abụọ nwere ihe nkwekọrịta nke ọrụ ị ga-akwụ onye ndụmọdụ ga-enyocha ụlọ gị maka mgbanwe ndị dị mkpa. Ị nwere ike ịsị na nke a ga-eri ego nakwa na ọ ga-adị mkpa inwe ọkwa dị otú ahụ. Ndebanye aha ego!
Na paragraf nke atọ, a na-enye ákwà maka ọbara ọgbụgba n'ụdị onyinye iji kpebie. Otú ọ dị, anyị nwere ike icheworị na enyemaka ahụ ga-abụ naanị akụkụ nke mgbanwe ndị ị ga-enwe ike ime (mgbe ị jisịrị onye ọrụ mmanye ike ga-eme ka ị gbanwee mgbanwe ụfọdụ).
N'ikpeazụ, a na-edebe nnukwu ego nke ego ụtụ maka ego ọkụ nke mba nke ndị mmadụ nwere ike ịgbaziri ego iji mezuo mgbanwe ndị a. Nke ahụ, n'ezie, ga-abụ ihe mgbazinye na ụma mmasị, ọ bụkwa otú a ka esi tụba ndị mmadụ n'olu ha: "Ị gaghị agbanwe, ma ụtụ gị ga-aba ụba. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe, ị ga-enwerịrị nkwupụta akụkọ kwadebere ma ị nwere ike ịnweta ntakịrị ego, ma karịa ihe niile na-agbazinye ego buru ibu". Na nkenke, a manyere ndi mmadu ka ha kwụọ ụgwọ ugwo ma ha ga-akwụ aka ekpe ma o bu nri. Site na onye Site na ìgwè mmadụ.
N'ebe ị na-anya ụgbọala, a na-eme ka ihe niile dịkwuo ọnụ ma gbanwee. Naanị gụọ maka oge:
Gọọmenti ga - achọ ka ndị Dutch gbanwere ụgbọala eletrik. Nke ahụ pụkwara ịbụ ụgbọ ala nke abụọ, bụ nke nwere atụmatụ nkwekọrịta dị mma. Na atụmatụ ihu igwe mbụ, ego ịzụta nke 6000 euro ga-etinye aka na bọtịnụ ọhụrụ, ma a kwụsịrị inye nkwado ahụ.
Onyinye ego ọhụrụ 'ka a ga-ekpebi', dị ka Agreement Agreement na-ekwu ugbu a. Na nkenke: ndị chọrọ ịzụta ụgbọala nkwụnye n'afọ ndị na-abịanụ, amaghị kpọmkwem ma a ga-eme nke a. Na ego ahụ ga-abụ obere ala karịa euro 6000, o yiri ka ọ bụ ụfọdụ.
N'ebe a kwa, gọọmenti na-ekwu na ndị mmadụ na Dutch ekwesịghị ịtụfu mmanụ ụgbọ ala ma ọ bụ mmanụ dizel. Mba, ọ dịghị mkpa, ma ọ na-efu ụfọdụ ndị ọgba tum tum ego ọzọ. Ọ bụ n'ihi na ọrụ mmanye dị na diesel ga-abawanye elu site n'ọzọ n'ime afọ atọ na-abịanụ.
A na-agbakwunye ego enyemaka ọhụrụ ahụ. Na nkenke: "ị maghị ihe ị ga-azụ ịzụ ụgbọ ala dị otú ahụ, ma ọ ga-adị mkpa". Ọfọn, ị ka nwere ike ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ dizel, mana ị ga-aga ọmarịcha ụlọ kwụọ ụgwọ. N'ezie, ịkwụ ụgwọ ọtụtụ ihe na-eme na "nzọụkwụ", nke anyị nwere ike iche na na omume ọ ga-abụ asaa-mile akpụkpọ ụkwụ.
Na nkenke, ị na-arụ ọrụ nke ọma na CO2 ihu igwe na afọ gara aga na otu ihe kpatara ya: Ịmepụta onye isi iji nwee ike ịzụta ọbụna ego karịa ndị mmadụ.
Ọ dị ịrịba ama na ọkwa ọkwa nke ihu igwe na-abịa n'otu izu na ụbọchị ụbọchị kachasị mma nke ọnwa June ka ekwuworo ruo ogologo oge na Europe dum. Anyị agaghị ekwurịta banyere nkà na ụzụ nke dị mkpa iji kpoo ihu igwe. Ihe ka otutu n'ime ha adighi, n'agbanyeghi 'echiche ndi mmadu gbara izu'.
Ebee ka ihe akaebe ndị na-egosi mmetụta dị mma nke mgbanwe ndị ahụ niile? Dịka ọmụmaatụ, mmepụta batrị maka ụgbọala eletriki bụ ọdachi dị oké njọ maka gburugburu ebe obibi, na enwere ọtụtụ arụmọrụ nke metụtara mgbanwe ahụ site na gas ruo eletrik. Kedukwa mmetụta mmetụta gburugburu ebe obibi nke ụdị ihe mkpuchi ọ bụla?
Anyị na-agba àmà ọzọ magburu onwe ya ọzọ 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta', ebe nsogbu nsogbu nke onwe onye na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ hyped; mmeghachi omume n'etiti ndị mmadụ na-ejikwa otu akwụkwọ akụkọ ahụ; ka ị na-emezi ngwọta (dị oké ọnụ) site na akpịrị ndị mmadụ.
CO2 bụ akụkụ dị mkpa na ikuku nke osisi na osisi na-eji mee ka ikuku oxygen. Ọ bụ dị ole na ole dị na mbara ikuku na ọ bụ ihe na-adịghị njọ, na CO2 bụ mmụba na njirimara mmata a maara (site n'oge dị mkpirikpi ka ihe ndị a na-ewere ọnọdụ), kama ihe si na arụ ọrụ anyanwụ karịa ihe kpatara ya zuru ụwa ọnụ. Ị nwere ike ịchọpụta nke a site na ịme nchọpụta dị mkpa. Otú ọ dị, ịntanetị ejirila ụma kere desinfo na mgbasa ozi na-anwa imeri gị site n'egha ụgha nke ozi ọma na nrọ na ha ka na-ekwu eziokwu ahụ. Ndi mmegide a na-achịkwa ugbu a na-arụ ọrụ dịka netiwu nchekwa. Ozugbo a dọbara azụ ahụ n'ụgbọ mmiri nchebe na-emegide, ụgbọ mmiri ahụ na-adaba, ndị mmadụ na-eri mmiri na-ebuteghachikwa na mgbasa ozi ndị isi na usoro iwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge ochie.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ewe iwe na ozi dịka nke gbasara nkwekọrịta ihu igwe, cheta na ị gakwaghị atụ anya mgbanwe site n'elu. Ndị òtù robber na Hague na Brussels adịghị n'ebe ahụ inyere gị aka. Ha na-ahụ ọdịdị nke ochichi onye kwuo uche ya, site na egwuregwu nke ekpe na aka nri, ndozi na mmegide. Ya mere, ị ghaghị ịgbanwe onwe gị ma mee ihe. Na-agụ Lee otú.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: ad.nl
PowNed tinye ndị omelenburgse vloggersrel na ọnọdụ na ndị omee, agbakwunye ma na-eduzi
Tags: agba, Kasje, nkwekọrịta ihu igwe, agbaziri, mbinye ego, onye ozi, mba, Obodo, ego ọkụ
Jaline Bies dere, sị:
29 June 2019 na 13: 20
Ọ bụrụ na m gere ntị na aghụghọ, anyị nwere ike ibu ụzọ kwụọ ụtụ isi na mgbe ahụ gbaziri ego ụtụ isi a na-akwụ ụgwọ, hmmm na-ada ụda.
Ihe nzuzu na ya na ndị ụlọ ọrụ na-esi ike kwa izu. Ọ bụrụ na i chere na ị nụla ihe niile, ha emeela ihe ọhụrụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ụgbọ ala ndị na-enye ha ohere ịkwọ ụgbọala bụrịrị ọkụ eletrik, emeela ka ụlọ ha bụrụ ihe na-egosi ihu igwe na-egosi na ọ dị mma?
29 June 2019 na 13: 53
Na ntụrụndụ nke euthanasia iwu anyị nwere ike n'ụzọ dị ukwuu belata CO2 emissions. Na ekele maka iwu D666 gbasara ihe owuwe ihe ubi, ọ bụkwa ube, nnụnụ abụọ nwere otu nkume.
29 June 2019 na 14: 00
.. ị nyerela iwu ka Sarco nye aka na ebe ka mma, n'ihi na ebe ka mma ka ịmalitere 😀
"N'ime ya ị nwere ike ịpụfu n'udo n'ebe ọ bụla"
29 June 2019 na 16: 15
ihe nkuku nke oma bu ihe ndi ozo di iche iche dika 'nchekwa uwa', ma ee, gaa ma kọwaara na onye mmadu bi na ya bu onye mmadu.
29 June 2019 na 18: 05
Ọbụna ma ị kọwaara ya, ndị nkịtị agaghị ekwenye. Nke ahụ bụ ịhọrọ ha nke ọma!
Ah, taa ha na-anọdụ ọdụ n'ụsọ osimiri na ihu igwe ọkụ a. Anyanwụ na-enwu, biya dị ọnụ ala, oge okpomọkụ amalitela. Ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ibe ha nwere ike ịchọta ibe ha.
Onye na - adịgide ndụ .. ma ọ bụrụhaala na onye ọbịa ahụ 'na - eto eto' ji nwayọọ nwayọọ na - ere ọkụ na pan, ndị nkịtị na - ejigide ya.
Nkwekọrịta ihu igwe bụ n'ezie ihe mgbochi ahia nke azụmahịa n'ihi na mba ndị ka dara ogbenye na mba EU ga-enwerịrị òkè na ajụjụ ahụ bụ ma hà nwere ike imeli ya. Ya mere, ha bụ eziokwu ISO. Ndụ ogologo 'free' n'etiti mba EU, ọ bụghị n'ihi na ọ dịghị adị.
29 June 2019 na 19: 56
N'ebe a, onye ọzọ a na-achịkwa ya bụ Patrick Moore, okpukpu abụọ, na mbụ, ọ na-edepụta GreenGBce LGBTQ na ndị mmadụ ole na ole a na-akpọ ndị na-ede akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ, o nwere ike imechi megidegide Greenpeace, n'ụzọ doro anya nke ọma.
Patrick Moore na-akwagharị na ọrụ mmegide a na-achịkwa
N'ebe a kwa, onye German nke ghagha ụgha nye onye obula n'eji akwara egwurugwu ya,
Ọ bụ ogologo oge dị mkpirikpi anyị na-ahụ na-akọwapụta ebe a.
29 June 2019 na 22: 19
Ọfọn, "German". Nke ahụ bụ mba ha dị egwu.
29 June 2019 na 23: 08
Njirimara egwurugwu na-ezo aka na kabbalah, freemasonry / new age etc. Ya mere, ọ bụ nkwenkwe ụgha ndị Juu nke Babilọn nke na-akpali ndị mmadụ gburugburu ụwa.
Kabbalah na ntụgharị uche maka mba
29 June 2019 na 23: 15
Akpa egwurugwu mbu edeputara n'akwukwo nso banyere Noa, onye noropu idei mmiri nke bibiri onu ogugu uwa n'ihi mmebi iwu ya. Na egwurugwu - "egwurugwu m na igwe ojii" - dịka ọgbụgba ndụ dị n'etiti Gd na "mkpụrụ obi niile dị ndụ," na-echetara Gd banyere nkwa ya mgbe iju mmiri ahụ ghara ikpochapụ ụwa ọzọ, n'agbanyeghị mmehie ya. Gịnị mere egwurugwu? Kedu ihe pụrụ iche banyere egwurugwu nke mere ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nke udo?
ihe na-emegide iwu, iwu, ma ọ bụ koodu omume; mmejọ.
M ga-elekwasị anya maka mmebi iwu ọzọ (ihe atụ anya)
Ya mere, usoro LGBTQ bu ihe mara nke oma "Mgbaputa site na nmehie"
30 June 2019 na 14: 44
N'ebe a, ọbụna akwụkwọ akụkọ ka mma banyere ụwa nke ndị a na-enyo enyo na otú e si jikọta ya na ọchịchị eze ahụ.
30 June 2019 na 16: 33
Akọwara mmetụta nke ikpe ọmụma.
30 June 2019 na 16: 43
7 July 2019 na 11: 23
Kedu mgbe ndị ọchịchị Netherlands na-enweta ụgwọ zuru oke maka ịgba ohu nke ụmụ edemede ahụ mere? Ọ bụ ezie na ọ bụ ụmụ nwoke nke edemede ahụ na-efu ya, ọ bụghị nke nkịtị. Kedu mgbe otu onye ọka iwu si mba ọzọ na-ebili na bọọlụ iji lụọ maka ụgwọ a maka mmebi iwu nke ụmụ mmadụ, ọ dịghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ ụmụ nwoke nke edemede ahụ kwadoro na onye ikpe nke ụmụ nwoke nke edemede ahụ na-akọwa nke ahụ. Ọ ga - ewute na onye ọka iwu ahụ si mba ọzọ agaghị ebili, na-atụ egwu ịbụ onye ndị ọka iwu ga - ezigara ya. Ma ọnọdụ nwere ike ịbụ ihe dị ya mkpa karịa ime ihe ziri ezi.
Ihe a na-ekwu bụ na ụmụ ụmụ nwoke si na edemede ahụ na-egosi onwe ha dị ka ndị mmeri nke ndị Dutch. Ee ha na-egwu egwu Ha buru ụzọ gbao ohu ma nweta ha nke ọma na ugbu a dị ka ndị a na-akpọ 'ndị nche'. Ị na-ahụ usoro a mgbe niile na iwu ọ bụla na Madurodam. Ndị nkịtị na-eburu egwuregwu ndị ahụ jọgburu onwe ya.
ọcha rabbit dere, sị:
30 June 2019 na 17: 28
Ihe dị oke mma, na ihe niile a na-eme na CO2 emissions adịghị ebelata ma ha kwagara mba ndị ọzọ dịka China. Ọ dịghị onye na-ekwu banyere mmepụta ọkụ CO2 site na mmepụta nke ụgbọala eletrik, ọ dịghị onye na-ekwu banyere osisi daa n'ihi osisi biomass. Ha na-emepụta CO2, ma nke ahụ esighi.
Mgbe ahụ, anyị ekwughị okwu banyere arụmọrụ nke usoro dum.
N'oge na-adịbeghị anya, m na-arụsi ọrụ ike maka ụlọ eletrik nke ụlọ a ga-akwadebe maka mgbanwe mgbanwe. Ịchọghị ịma ókè ego nkwụsị na-arị elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ 3x 40Ampere kama 25A,
Onye ọ bụla nke na-agbakọta ihe niile ma na-ewe ihe niile na akaụntụ ga-achọpụta na ọnụọgụ CO2 na-arịwanye elu kama ịdalata, ya mere nkwekọrịta ihu igwe bụ ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye.
Nanị uru nke ihe ndị ahụ bụ ihe mkpali nke akụnụba, nke na-abaghị uru nye ụmụ amaala nkịtị.
1 July 2019 na 00: 33
Na iche na na Germany na France ị ga-enweta ego ma ọ bụrụ na ị gbanye gas. Ha ga enwezi gas dị n'ebe ahụ? Right ...
Na ... na gas na Netherlands, ka ha ga-akwụsị ịkwụsị mgbapụ na Groningen ma ọ bụ na ọ gaghị enyefe ha?
Mmechi: mmadụ ole na ole na-aba ọgaranya ma ìgwè mmadụ ga-akwụ ụgwọ ...
5 July 2019 na 14: 58
Coco Flannel dere, sị:
24 July 2019 na 18: 19
Imejuputa akpa na ọkwa Dutch abụghị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ. Nke ahụ bụ ọnwụnwa a na-enye ka ndị ọchụnta ego nwee ike ịzaghachi ma si otú a mee ka okpukpe ihu igwe gbasaa ma gbasaa ya n'etiti ndị mmadụ na ọhụụ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Dutch dịkwa obere, obere mpaghara nke ụka ihu igwe zuru ụwa ọnụ, ya na ọtụtụ ndị nwere ezi obi.
Ebumnuche dị elu (nke dị elu karịa mba dicif nke Netherlands) bụ ime ka ọha mmadụ gbanwee ngwa ngwa o kwere omume, gbanwee ha ka ọha mmadụ na-achịkwa teknụzụ, nke nwere ụmụ nkịta ibelata teknụzụ ('anyị na-etipịa gị' teknụzụ na ihe ịchọ mma na-aga aka na aka na eji teknụzụ teknụzụ nke aghaghi ịrafu). Nke a kwadoro maka ezigbo nnukwu ego, ezigbo ike.
25 July 2019 na 10: 55
Daalụ nke ukwuu maka akwụkwọ nkwanye.
Na onodu nke ndi agbaghari agbaghari, nke a bu ihe ozo siwilliamism na London
Ebee ka ndị otu a si abịa na mberede
24 July 2019 na 18: 40
M na-akwado akwụkwọ Nikos Salingaros 'Anti-architecture (enwere ụdị ọzọ na ịntanetị), nke a bụ mpaghara egwuregwu nke ike site na nkọwa. Churchka ihu igwe dị n'akụkụ ihe gbasara mmụọ / omume, aesthetics, aesthetics mepụtara site na teknụzụ bụ mpaghara ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ikike, ọ bụghị nanị na ije, ma ije dị mkpa ma buru oke ibu (lee ụka modernism, neo-modernism / post-modernism na deconstructivism) yabụ ụzọ maka akara akara na ụzọ maka ịdabere na ịchịkwa uche mmadụ ...
Chọọchị ihu igwe na-amasị omume na nlanarị, aesthetics bụ ụzọ site na ịrafu, ụzọ dị oke ike, ya mere a ga-erigbu ya na mpaghara niile enwere ike.
" Kedu ihe ha bụ na ogologo oge ka ihe ahụ dị?
Kpochapụ onye nlekọta kacha mma maka mkpochapu ego na ịchịkwa ndị mmadụ niile »
Nleta nile: 15.974.144
SandinG op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1